UXINZELELO LWE-HARDWOOD FLOORING - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Uxinzelelo lwe-Hardwood Flooring
Uxinzelelo lwe-Hardwood Flooring
Umgangatho onzima oxineneyo unikezela uyilo lwakho lwangaphakathi ngobuso obukhuhliweyo, obunokubuyisa ukongeza ubuntu kunye nobuhle ekhayeni.
Ukwenza indawo eyahlukileyo ngokupheleleyo akukaze kube lula ngazo zonke iindlela ezikhoyo. Olunye ukhetho olukhulu luxinzelelo wokhuni oluqinileyo . Le yimveliso esetyenziselwa ukwenza uyilo lwe-rustic okanye ilizwe eliphefumlelweyo livakalelwa likhaya. Kutshanje ukujongwa kweenkuni ezibuyisiweyo kuye kwaqhubela phambili kwimo yelixesha, kuba yinto ethandwayo kumakhaya.
iingoma ezihlekisayo ukuhamba ezantsi
Umthi onzima oxinzelelweyo uvelisa ukuthungwa, ukwahluka kweenkozo, umbala kwaye uya kongeza umtsalane nakweyiphi na indawo. Ukwahluka okwahlukileyo kweepateni kunye nobukhulu beebhodi nako kunokubangela ukubonakala okungafaniyo nokunye. Iiplanga ezibanzi ziyafumaneka ezinokwenza indawo ibonakale inkulu kunokuba injalo. Ukongeza iphethini ye-herringbone kunokuthatha ukuziva ukusuka emaphandleni ukuya kubomi bexesha lokubetha kwentliziyo. Nokuba into ilula njengokongeza umda inokwenza indawo ngokungafaniyo nantoni na owakha wayibona.
Ukwazi umahluko phakathi komthi oxinzelelweyo kunye Isandla esenziwe ngamaplanga uya kuba ngumahluko omkhulu xa uyila indawo yakho. Umthi osikiweyo ngesandla wenziwa ngesandla ngokutsala imela yokuzoba, equlathe iblade enye ephethe isiphelo sobabini sokubambelela, ephindaphindeka ebhekisa kumthi weenkuni ecoca umaleko womthi. Yile ndlela yonke imigangatho eyenziwe ngayo ukuze ikhuphe naziphi na izitenxo. Ngoku obu buchule busetyenziselwa ukongeza isitenxo.
Umthi oxinzelelweyo uya kwenziwa ngokufanayo, kodwa ngomatshini. Oomatshini baya kutyibilika kumphezulu womthi kwaye benze imiqolo enezinciphisi zomthi. Xa iinkuni zenziwe ngentlabathi isondo ngalinye lesanti liya kuba bubungakanani obahlukileyo ukwenza iigouges kunye nokukhuhla kubonakale kungahleliwe. Oku kudala iintlobo ezahlukeneyo zokumakisha eziza kudala ukubonakala kweengcingo.
I-birch ekhathazekileyo yobunjineli bokhuni-Jonga eWayfair
Le ndlela inokwenziwa kokubini okuqinileyo kunye nobunjineli bomthi okhuni ofanayo nomthi okruthwe ngesandla. Ngenxa yomsebenzi owongezelelekileyo womatshini ofunekayo ukudala imbonakalo egugileyo yomgangatho weenkuni unamaxabiso aphezulu kunomgangatho ophakathi womthi. Amaxabiso ezinto ezixineneyo zomgangatho wokhuni ziya kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lomthi okhethiweyo kunye nakuphi na ukugqitywa okungaphezulu, iipateni zofakelo, njl.
Umahluko othandwayo yiplanga elibanzi elixinzezelekileyo lomgangatho wokhuni olunikezela iibhodi ezibanzi. Ngokwesiqhelo ububanzi beeplanga ezibanzi buqala nge-5 ″ kwaye ungahamba ngayo yonke indlela ibe yinto engummangaliso engama-20 ″. Nangona kunjalo ubungakanani obudume kakhulu yi-7 1/2 ″. Uyilo lwangaphakathi oluneplanga elibanzi oluxinzezelekileyo lomthi ludla ngokuba nokwahlula ngakumbi kunye neempawu kuneplanki encinci. Uhlobo lweentlobo zeenkuni ozikhethileyo ziya kudlala ifuthe kububanzi beebhodi. I-Hardwoods efana ne-oki kunye ne-hickory zihlala zihamba kancinci kwaye azifumaneki kwifom ebanzi.
Ukongeza kububanzi, ukukhetha iplanki ende enjenge-7 'ubude iya kukuvumela ukuba unciphise inani lemigangatho kumgangatho wakho. Ngokubanzi, ukusebenzisa iplanga ebanzi kunezibonelelo ezinje ngokudala indawo yokucinga engaphezulu, ukunciphisa ukubonwa okubonakalayo kunye nokubonisa iimpawu zomthi ezinje ngezaqhwithi, imigca kunye namaqhina.
Iplanga ebanzi yeplanga ebanzi egumbini lokuhlala- Jonga eWayfair
Ukufakelwa kuya kuba yinto encinci ngakumbi kunofakelo lomgangatho oluqinileyo lomgangatho. Oku kuya kuthetha ukuqesha ingcali kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokuphepha ukonakalisa iibhodi esele zinamaxabiso okuhombisa. Oku kunokukongela imali, kwaye ekuhambeni kwexesha konga uxinzelelo oluninzi.
Umthi onzima oxinzelelweyo yimveliso enokugcinwa ngokulula. Kungenxa yokuba ukutyibilika komphezulu womthi onzima awuyiyo imveliso efanayo kakhulu (ngenjongo), isenza nakuphi na ukukrwela okungaphezulu kunye nokukhuhla okufihliweyo ngokulula ngaphezulu. Oku kuyakongeza ukongeza isimilo kunye nobomi kwinkathazo kunye nokunxiba okujongeka kumgangatho wakho ngokuhamba kwexesha.
Ngenxa yokugqitywa kwe-matte ehlala isetyenziswa kumgangatho wokhuni oluqinileyo kunye nothuli akubonakali lula. Iinkuni ezixinzezelekileyo zisenokugqitywa nge-urethane, enombala ocacileyo oya kuthi uvumele iinkuni ukuba zihlale zomelele kwaye zifuna ukulungiswa okuncinci. Umgangatho wokhuni oluxineneyo uya kuba lukhetho olufanelekileyo kumagumbi asetyenzisiweyo njengoko ukubonakala kwawo kubukhali kungazukubonakalisa ukonakala okuqhelekileyo kunye nokukrazula ngokulula.
Ukufumana ezinye izimvo ndwendwela eli phepha ukubona igalari yethu Iikhabhathi zekhitshi zomthi ezixinzezelekileyo .
Iplanga ebanzi 7 1/2 'x 5/8' European French O… $ 5.89 umthengisi ogqibelele (8) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izixhobo zeKhaya laseAchim VFP2.0MH10 iTivoli I… $ 27.99$ 49.99 umthengisi ogqibelele (523) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ambient Bamboo - Bamboo Flooring… $ 2.00 umthengisi ogqibelele (9) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-CALI Vinyl Plus Isampulu, IVinyl Plank Flooring,… I $ 1.99 umthengisi ogqibelele (5) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ungayiphakamisa njani iringi yesithembiso
4 intshi ye-backsplash
Ingoma yabakhonzazana ukuhamba phantsi epasejini